Ọ dịghị New Year enweghị a New Ị
2 Ndị Kọrint 5:17 kwuru, sị, "Ya mere ọ bụrụ na onye ọ bụla na-Christ, ọ bụ a ọhụrụ e kere eke: ihe ochie agasiwo; le, ihe nile na-aghọ ndị ọhụrụ."
Oge ọ bụla a afọ ọhụrụ na-apụta gburugburu, folks amalite na-eche banyere ihe ha pụrụ ịgbanwe ná ndụ ha. Ụfọdụ ndị na-ekwu na ha na-aga ifelata na-amalite na-eri ahụ ike. Ndị ọzọ na-ekwu na ha na-aga aga azụ mahadum ma ọ bụ ga-esi nke ụgwọ. Ụfọdụ na-ekwu na ha na-aga na-ide akwụkwọ ma ọ bụ na-amalite ha onwe ha ego. ma ndị ọzọ na-enyefe na-haziri ma ọ bụ iwepụtakwu oge ndị ezinụlọ na ndị enyi.
Mmalite nke a afọ ọhụrụ bụ n'ezie a oké oge na-eme ka a mgbanwe ná ndụ gị. M kweere na Chineke na-enye anyị dị otú ahụ oge nrịbama dị ka ụzọ anyị ka anyị kwụsị, anya azụ na ndụ anyị, ma mata ihe na anyị nwere ike na-agbanwe n'ọdịnihu otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-elekwasị anya na-eme ka nanị eyi mgbanwe - .. mgbanwe ndị ga-melite otú ha dị, ha ka mma ọkọlọtọ nke ndụ, ma ọ bụ welite otú ndị ọzọ na-ahụ ha na m kweere na ndị kasị mma mgbanwe ị pụrụ ime ka bụ a mgbanwe site ntughari -. mgbanwe nke obi, spirit, na uche ọzọ okwu, a mgbanwe na-eweta banyere ọhụrụ gị maka afọ ọhụrụ n'ihi na e nwere ike ịbụ n'ezie a New Year gị ma ọ bụrụ na e nweghị ọhụrụ gị maka New Year. .
Ya mere, taa, na m chọrọ ịkọrọ gị site n'Okwu Chineke otú ị pụrụ ịghọ ọhụrụ gị dị ka anyị na-isi n'ime afọ ọhụrụ. Abụọ Kọrint isi 5, Paul na-edegara ndị Kọrint kwere ekwe banyere pụtara ọnwụ Kraịst. ọ na-emesi ike na Kraịst nwụrụ maka "mmadụ niile", otú onye ọ bụla nwere ike ndụ ọhụrụ site na Jizọs Kraịst. n'ihi na nke ọnwụ Kraịst, nzọpụta bụghị nanị ndị Juu, ma e megheere onye ọ bụla. nke a bụ ozi ọma n'ihi na anyị taa n'ihi na ọ na ka anyị mara na onye ọ bụla nwere ike a oké mgbanwe ná ndụ ha site n'ike nke Oziọma nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Ọtụtụ ndị achọpụtala na ndụ ọhụrụ nime Kraịst Ụfọdụ ndị a ma ama, onye ị nụrụ, dị ka :. My Carrie Underwood, Super-Bowl emeri football nchịkwa Tony na-asọ oyi, NBA ọkpụkpọ Kevin Durant, onye edemede na onye ozi ọma na-enye nkọwa Kirsten Powers, omee Blair Underwood, Olympic na-eme egwuregwu Brady Ellison, Olympic gold medalist Sanya Richards-Ross, na PGA golf tour onye mmeri Webb simpson, niile kwuru na onye na-mere nnukwu ihe dị iche na ndụ ha bụ Jizọs Kraịst.
Blair Underwood kwuru, sị, "Abụ m a Christian. M kweere na Chineke nwere atumatu. M kwere na ọ na-agaghị ahapụ anyị ka anyị nghọta. Dị ka a mmadụ, m na-adịghị niile azịza. Inwe ike na-atụgharị ihe ruo a elu ike na-arụ ọrụ m. "
Tony na-asọ oyi, sị, "Ị na-mgbe ga-esi n'ebe ọ bụla egwuregwu ma ọ bụ ná ndụ ruo mgbe ị na-ekwenyesi ike nke eziokwu nke ozioma nke Jesus Christ. I nwere ike bụrụ onye na-ọkachamara na-eme egwuregwu ma ọ bụ nwere ama na mma ụgbọala na ọmarịcha ụlọ na otutu ego, ma ihe ị ga-ahụ bụ na ihe nile nke na stof aga efep mara mma ngwa ngwa. ị ga-aghọta na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị, nakwa na Ọ nwụrụ bụghị nanị iji bụrụ Onye Nzọpụta anyị ma nke mere na ọ pụrụ ịbụ na etiti nke anyị bi. "
Kirsten Powers kwuru, "m adịghị eche n'ezie dị ka m nwere ihe ọ bụla obi ike mgbe m ghọrọ Onye Kraịst; m nnọọ nyere m na ọ bụghị obi ike;. m enweghị nhọrọ ọ bụla ime m nọ na-agbalị ekweghị ma m nnọọ. apụghị izere ịnakwere Christ. "
NBA ọkpụkpọ Kevin Durant kwuru, sị, "Ekweere m na Chineke hụrụ m n'anya, na ọnwụ ịchụ àjà nke Jizọs maka mmehie m, na amara ya, ọ bụghị m ọrụ ọma, bụ ihe na-azọpụta m. Nke ahụ eweda m na-eme ka m na-efe Ya. M na-kwere Heaven debeere m na na kacha mma bụ ma na-abịa. m na kwukwara a dị mfe igbu m nkwojiaka na-ekwu, na-ebi n'ihi na mgbe ebighị ebi. Okwu Chineke na-ekwu na ebe anyị na-niile gawa. + M chọrọ ịmalite ibi na ebighị ebi n'ọnọdụ na ihe niile m na-eme ugbu a. "
Grammy award-emeri na-agụ egwú Carrie Underwood kwuru, sị, "My songs na-mgbe ụfọdụ lekwasịrị anya Chineke, Jizọs na okwukwe. Kwa Wednesday, mụ na di m nwere ìgwè ọmụmụ na ndị enyi anyị. M ịga chọọchị. Anyị na-agbalị itinye n'oge ahụ n'ụtụtụ na-na-ekpe ekpere. "
Olympic gold medalist Sanya Richards-Ross kwuru, sị, "E nwere ọtụtụ ihe bara uru amaokwu na Bible, ma onye m na-asị onwe m ọtụtụ mgbe bụ, 'm nwere ike ime ihe niile site na Kraịst bụ onye na-ewusikwu m!' Nke ahụ bụ ọkacha mmasị m n'ihi na track , m na-emekarị na-agbalị ime ihe a na-adịkarịghị e mere n'ihu. na m maara na ọ bụ nanị Chineke nke na-enye m ume iji mezuo ihe ndị a. "
Anyị nwere ike ịga n'ihu na-ihe atụ. Ma m chọrọ ka ị mara na ị pụrụ isonyere amasị nke ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ site n'ikwe Jesus Christ ka a ọhụrụ gị maka afọ ọhụrụ na ndụ gị karịrị. Olee otú mgbanwe abịa banyere?
1. mbụ, ọhụrụ gị maka afọ ọhụrụ, ị ga-"n'ime Kraịst." Amaokwu nke 17 na-amalite na, "ya mere ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-Kraist ..." Okwu Grik maka "na" pụtara na-a 'ofu ọnọdụ' ma ọ bụ 'ibi n'ime set ókè'. Gịnị ka ọ pụtara na-Christ? N'ịbụ Christ pụtara bụ eguzo nke a kwere ekwe mgbe ọ nabatara Jizọs Kraịst dị ka ha nzọputa. ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, i nwere ike na-enweghị a ọhụrụ si ebi ndụ ma ọ bụ a ọhụrụ echiche.
Okwu 'na Kraịst' ma ọ bụ 'na Ya' na-eji ọtụtụ ugboro na New Testament na-akọwa ọnọdụ na uru nke onye kwere ekwe nwere Rịba Ndị Efesọs 1: .. 7 Nke a amaokwu na-agwa anyị na 'Na ya ka anyị nwere mgbapụta site ọbara ya , mgbaghara nke mmehie, dị ka akụ nke amara ya ... 'Anyị na-ahụ ebe a na ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, gị mmehie gị na-na-asa n'okpuru ọbara Nwa Atụrụ ahụ. Site ọnwụ Kraịst, na n'ihi na Chineke amara, na ị na-gbapụtara ma ọ bụ napụtara n'aka mmehie na ntaramahụhụ nke mmehie nke dị Hell.
Nke abuo, achọpụta Ndị Efesọs 1 :. 3 Nke a amaokwu na-ekwu na Chineke "agọziwo anyị niile na ngọzi ime mmụọ n'ebe di n'eluigwe n'ime Kraist ..." Ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, i nwere ngọzi ime mmụọ na ị ga-agaraghị nwere Biko rịba ebe a na nke a. na-adịghị ekwu okwu banyere ihe onwunwe ngọzi. N'ịbụ Christ apụtaghị na ị ga-enwe nnukwu ụlọ ma ọ bụ ihe dị oké ọnụ ala. Ma, ị ga-enwe ngọzi ime mmụọ dị otú ahụ dị ka udo na kachasi uche nile, ọṅụ unspeakable, obi ike na n'etiti oké ifufe nke ndụ , na olileanya nke heaven n'etiti obi nkoropụ Matthew Henry kwuru,. "Ime Mmụọ na nke eluigwe ngọzi ndị kasị mma ngọzi; na nke anyị na-enweghị ike ịbụ anuri."
Ugbu a, rịba ama Ndị Kọlọsi 2:10: "Ma unu na-ezu na ya, nke bụ onyeisi ndị niile ihe gbasara onye isi na ike." Gịnị ka ọ pụtara ịbụ zuru ezu "n'ime Kraịst" The okwu Grik maka "zuru ezu" pụtara 'na-? mere zuru 'ma ọ bụ' na jupụta n'elu '. ọzọ okwu, ma ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, i nwere ihe niile ị chọrọ ibi ndụ ndị Kraịst ndụ. i nwere ihe niile ị chọrọ-atụle ezi omume n'anya Chineke. i nwere ihe niile ị chọrọ agafe si a ndụ n'ụwa na-esonụ ndụ Heaven.
Ya mere, anyị na-ahụ "ke Christ" pụtara na mmehie anyị niile na-na-asa n'okpuru ọbara na anyị na-napụtara ike nke mmehie na ntaramahụhụ nke mmehie. N'ịbụ Christ pụtara na anyị nwetara ngọzi ime mmụọ n'ihi na nke Jizọs Kraịst ; na ịbụ na Kraịst pụtara na anyị na-adịghị kọrọ ihe ọ bụla na-echebara echiche nzọpụta anyị na ndụ.
Ịbụ "ke Christ" bụ nzọụkwụ mbụ na-enwe a ọhụrụ gị maka afọ ọhụrụ.
2. Iji ọhụrụ gị maka afọ ọhụrụ, ị ga-aghọta na ị bụ a "ọhụrụ e kere eke." Nke abụọ Kọrint 5:17 kwuru, sị, "Ya mere ọ bụrụ na onye ọ bụla na-Christ, ọ bụ a ọhụrụ e kere eke ..." E nwere ọtụtụ ndị Kraịst bụ ndị na-ebi ndụ nhụsianya,-adịghị amị mkpụrụ, na meriri ndụ nanị n'ihi na ha adịghị aghọta na ịnabata eziokwu na ebe ọ bụ na ha bụ ndị na Kraịst, ha bụ ndị ọhụrụ e kere eke ma ọ bụ oge ha na-etinye ndị na-ochie ụzọ na-amalite ndụ dị ka ha guzo dị ka a nwa Chineke.
Kere a na-eto eto nwoke bụ enweghị ebe obibi, nkịrịka, adịghị ọcha, na ndị ogbenye. O na-ejegharị efak na-arịọ maka mkpụrụ ego dị nnọọ ka a aru-eri kwa ụbọchị. Otu ụbọchị, otu nwoke si na-achọ ya dị ka ọ na-anọdụ ala na okporo ámá arịọ . nwoke a na-agwa ya na ọ bụ nwa a bara ọgaranya azụmahịa nwe na na Nna ya chọrọ ya na-abịa n'ụlọ, na-ndụ ya na egwu, na-esi na akwụkwọ. ọ na-agwa ndị na-eto eto onye na e nwere ọtụtụ ụlọ maka ya na nna ya mansion na na ihe niile o kwesịrị - nri, uwe, na ego -. ga-akpọrọ elekọta na isi Ugbu a, were ya na ọ bụrụ na ndị ogbenye na-eto eto nwoke ahụ jụrụ na-nna ya elu na ụdị na-enye na kpebiri ịnọgide a-enweghị ebe obibi arịrịọ.
N'ezie nke ahụ bụ nzuzu. Ma, nke ahụ bụ ihe ọtụtụ ndị Kraịst na-eme onye ọ bụla na kwa ụbọchị. Ha na-adịghị ebi ndụ dị ka ha ọnọdụ dị ka ụmụazụ Kraịst. Neil T. Anderson dere n'akwụkwọ ya, The n'agbụ emebi, na Setan nwere ike "ngọngọ irè nke a Kraịst ma ọ bụrụ nwere ike iduhie gị ikwere na ị bụ ihe ọ bụla ma a ngwaahịa gị n'oge gara aga - n'okpuru mmehie, na-ewekarị okpu, ma na-achịkwa gị àgwà "Ọ gara n'ihu ikwu," Satan nwere ike ime ihe ọ bụla banyere ya. gị itie ke Christ, ma ọ bụrụ na o nwere ike na-eduhie unu ikwere ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru abụghị eziokwu, ị ga-adị ndụ dị ka ọ na-abụghị eziokwu. "
Ọ bụrụ na ị na-adịghị aghọta na ịmakụ eziokwu na ị bụ ọhụrụ e kere eke na Kraịst, mgbe ahụ, ị ga-ebi ndụ dị ka Kraịst zubere maka gị ibi. Ị ga-enweghị ike, na-enwe mmeri ndụ na ị pụrụ inwe. Gị "afọ ọhụrụ" ga-abụ otu dị ka gị "ochie afọ." n'agbanyeghị otú olileanya na nchekwube ị na-eche banyere New Year, na ihe ọ sọkwara ị chọpụta na-eme ka afọ ọhụrụ dị iche iche, ekwensu ga-echetara gị nke ọ bụla ọdịda i nwere na n'afọ gara aga na afọ tupu. Ọ ga-ibu arọ unu na mmehie gị na-emehie ihe mgbe mmalite nke New Year ma ọ bụrụ na ị na-anabata ya ụgha ma kwere na nke ahụ bụ nanị ụzọ ị bụ, ị ga-aga ebe ọzọ afọ nke-adịghị ebi ndụ ruo gị zuru nwere dị ka a nwa Chineke.
M ebe a na-agwa gị na ị na-adịghị na-n'agbụ mmehie. Ị adịghị ga-aga site afọ ọzọ nke na-eme otu ihe ahụ na-emehie ayak otu mmehie. Ị nwere ike a ọhụrụ gị maka afọ ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị na-na-aghọta gị guzo dị ka a ọhụrụ e kere eke na Christ.
3. Iji nwee ọhụrụ gị maka afọ ọhụrụ, ị ga-etinye pụọ niile 2 Ndị Kọrint 5:17 na-ekwu na "ọ bụrụ na onye ọ bụla na-Christ, ọ bụ a ọhụrụ e kere eke: ihe ochie agasiwo; le" ochie ihe. ", ihe niile na-aghọ ndị ọhụrụ. "Ha na-ekwu na definition nke ara na-eme otu ihe ahụ ugboro ugboro na-atụ anya na dị iche iche na ya pụta. nke ahụ bụ eziokwu. ma ọ bụrụ na ị chọrọ dị iche iche na-arụpụta afọ ọhụrụ, ị ga-akwụsị na-eme otu agadi ihe ugboro ọzọ. Bible na-ekwu na ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ e kere eke, mgbe ahụ ihe ochie a ga-"agabigawo." Gịnị bụ ihe ochie na ndụ gị na ị chọrọ iyipụ na afọ ọhụrụ?
Ndi ị na-edina n'afọ a gara aga? Ọ bụ na unu na-eleghara ekpere ma na-agụ okwu Chineke n'afọ a gara aga? Ndi ị na-aghọ aghụghọ na connive nwere ụzọ gị n'afọ a gara aga? Nwunye, ị bụ enweghị nkwanye ùgwù di gị n'afọ a gara aga? Di, ka unu na-n'anya ndinyom unu dị ka ị kwesịrị ị na n'afọ a gara aga? Children, ka ị na-enupụ isi na ndị mụrụ gị n'afọ a gara aga? ọ bụla i mere n'oge gara aga afọ na nwetara gị ọjọọ results, gị mkpa itinye efep ke afọ ọhụrụ.
Rịba ama amaokwu a si Ndị Kọlọsi isi nke 3 :. "Ma ugbu a, unu onwe-unu yipụkwa ihe a niile; iwe, ọnụma, echiche ọjọọ, nkwulu, inyi nkwurịta okwu unu n'ọnụ pụta Ụgha abụghị onye ọzọ, ịhụ na unu na-etinye anya agadi nwoke na ya omume. "
Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ka afọ ọhụrụ a oké n'afọ, ị na-aghaghị iyipụ niile ihe ochie na i mere na afọ ikpeazụ na afọ ndị gara aga mere ka afọ ahụ a afọ ọjọọ. Nye gị n'oge gara aga na Chineke site na Jizọs Kraịst na Ọ ga na-elekọta ya n'ihi gị.
Ka m na-akwado gị bụghị nanị na-ewepụ mmehie na ọdịda nke afo gara-aga, ma mụta ihe na ha ma chefuo banyere ha. M kwere na obi m nile na ihe mgbaru ọsọ ma na ebube oru ngo mgbe e dechara ruru ndị mmadụ enweghị ike ichefu gara aga karịa ihe ọ bụla ọzọ ihe kpatara ya. ị ga-adịghị mezuo ukwuu nke ihe ọ bụla na afọ ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị na-ekwe ka uche gị bi n'elu mmehie, nsogbu, nsogbu, na ọdịda nke gị n'oge gara aga.
N'oge Aịsaịa 43:18, Chineke nyere iwu nke ụmụ Israel ichefu ihe gara aga O kwuru, sị :. "Cheta unu ihe mbụ niile, ọ dịghịkwa tụlee ihe ochie." N'eziokwu, Chineke anaghị echeta mmehie anyị. A amaokwu ole na ole mgbe e mesịrị na otu isi ọ na-ekwu, "m, ọbụna mụ onwe m, m na ọ na blotteth si gi mmebi iwu n'ihi mụ onwe m, na-agaghị echeta gi mmehie." n'ihi ya, ọ bụrụ na Chineke na-adịghị na-echeta anyị mmehie anyị, na-eme adịghị ị na-eche na ọ bụ ihe kasị mma maka anyị na-eme otu ihe ahụ?
Dennis DeHaan dere a obere uri nke na-aga dị ka nke a:
Lee bụghị azụ ụnyaahụ
Ya mere jupụtara odida na ụta;
Lee n'ihu ma na-achọ Chineke way-
All mmehie kwuputa ị ga-echefu echefu.
My enyi, wepụnụ ochie mmehie na ọdịda nke gị n'oge gara aga. Ịmụta site na ha na mgbe ahụ na-echefu ihe ha mere na a na-esote afọ nwere ike ịbụ oké otu, n'ihi na a ga-enwe afọ ọhụrụ gị ma ọ bụrụ na e nweghị ọhụrụ gị maka afọ ọhụrụ.
Dị ka anyị na-emechi taa, m chọrọ ikwu okwu na nke ndị ị na-mgbe nabatara Jizọs Kraịst dị ka Onye Nzọpụta gị. Ọzọ okwu, ị na-adịghị "ke Christ" ugbu a. Achọrọ m na-egosi gị otú ị nwere ike inwe na Christ. Nke a na-bụ nanị ụzọ i nwere ike ịgbanwe ndụ gị ntughari.
Ọtụtụ oké ndị nke gara aga ma na ugbu a ekwuwo Jizọs Kraịst na mmetụta o nwere na ndụ ha.
The oké French agha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndú Napoleon Bonaparte kwuru, "m iju na ebe oké ọchịchọ na nrọ nke onwe m, Caesar, na Alexander kwesịrị mikpuru n'ime mkpa ikuku, a Juda nwoke onye oru ugbo - Jesus - ga-enwe ike iji gbatịa aka-Ya gafee narị afọ na ịchịkwa olileanya nke ndị ikom na ndị mba ọzọ. "Ezigbo enyi, i nwere ike ka Jizọs Kraịst na-elekọta gị aka dị ka mma.
Basketball oké Julius "Dr. J" Erving kwuru, sị, "Nzube nke ndụ bụ ka a hụrụ site Kraịst ná ndụ gị, na-aghọta ihe Ya atụmatụ bụ, na-esonụ na atụmatụ."
Kpụrụ President George W. Bush kwuru, sị, "Kraịst bụ kasị ukwuu ọkà ihe ọmụma: Ọ gbanwere obi m."
Ọkà mmụta okpukpe na ọkọ akụkọ ihe mere Philip Schaff, sị, "enweghị Christ, ndụ dị ka chi ojiji na ọchịchịrị n'abalị n'ihu; na Kraịst, ọ bụ chi ọbụbọ nke ụtụtụ na ìhè na ima nke ụbọchị zuru n'ihu."
The oké Scottish dere Robert Louis Stevenson kwuru, sị, "Mgbe Kraịst bịara n'ime ndụ m, m bịara dị ka a na-edozi ụgbọ mmiri."
The British onye edemede na onye mgbasa ozi na àgwà Malcolm Muggeridge kwuru, "m nwere ike ikwu na ọ dịghị mgbe m maara ihe ọṅụ dị ka ruo mgbe m nyere achụ obi ụtọ, ma ọ bụ na-elekọta na-ebi ndụ ruo mgbe m họọrọ na-anwụ anwụ. N'ihi na abụọ ndị a chọpụtara na m beholden Jizọs."
NFL quarterback Sam Bradford kwuru, "m n'ezie na-adịghị ahụ ihe mere ị ga-achọghị na-enwe mmekọrịta na Jizọs Kraịst. M pụtara, ọ bụghị naanị na ọ na kasịnụ mmadụ ka mgbe na-eje ije n'ụwa, Ọ bụ ihe niile m na chọrọ na-agbalịsi ike. Ọ bụ ihe niile na onye ọ bụla ga-ebi na-achọ na-agbalịsi ike. "
World na-ama ọkwọrọikọ Luis Palau kwuru, sị, "Otu zutere Jizọs Kraịst bụ iji na-agbanwe unu, kama, ruo mgbe ebighị ebi."
Jesus Christ chọrọ ịgbanwe gị taa Ọ chọrọ ime ka ị mmadụ ọhụrụ si n'ime Chineke kwuru na Ezekiel 36:26: .. A "obi ọhụrụ ga-m na-enye gị, na mmụọ ọhụrụ m ga-etinye n'ime unu: na m ga-ewepụkwa stony obi nke anụ ahụ gị, na m ga-enye unu obi nke anụ ahụ. "
Chineke chọrọ ka a na ụdị mgbanwe ná ndụ gị Ọ bụ ya mere o zitere Ọkpara Ya Jizọs Kraịst mere na anyị nwere-azọpụta site na nmehie na ntaramahụhụ nke mmehie The Bible na-ekwu na John 3:16: .. "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa, nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, na onye ọ bula nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama nwee ndụ ebighị ebi. "
Ka m na-egosi gị otú ị pụrụ ịnakwere Jizọs Kraịst dị gị Nzọpụta taa.
Mbụ niile, ị ga-aghọta na ị bụ onye mmehie, dị nnọọ ka m, nakwa na ị gbajiri iwu Chineke The Bible na-ekwu na Rom 3:23 :.. "N'ihi na ihe niile emehiewo ma eru ebube nke Chineke" biko na-aghọta na n'ihi mmehie gị, ị na kwesịrị ebighị ebi ntaramahụhụ hell. Rom 6:23 na-ekwu, "ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ ... a bụ ma nkịtị ọnwụ n'ili ebighị ime mmụọ ọnwụ n'ime ọdọ ọkụ.
Olee otú ị pụrụ ga-azọpụta site ọnwụ a Rom 10 :? 9,13 ekwu, sị: "Nke ahụ ma ọ bụrụ na gi onwe-gi onu gi kwuputa Onyenwe anyị Jizọs, na kwa kwere na obi-gi na Chineke emewo kpọlite ya n'ọnwụ, ga-azoputa gi ... n'ihi na onye ọ bula nke ga-akpoku aha Onyenwe anyị ga-azoputa. "
Ọ bụrụ na i kweere na Jizọs Kraịst nwụrụ n'elu obe n'ihi mmehie gị, e lie ya, ndị nwụrụ anwụ bilie, na ị chọrọ ịtụkwasị Ya obi maka nzọpụta gị taa, biko na-ekpe ekpere na m na nke a dị mfe ekpere: Nna Nsọ Chineke, m na-aghọta na m m a mmehie na na m mere ụfọdụ ihe ọjọọ ná ndụ m. m gbajiri gị iwu. n'ihi na Jizọs Kraịst, n'ihi biko gbaghara m nke m na mmehie m. m ugbu a, kwere na niile nke obi m na Jizọs Kraịst nwụrụ n'ihi m, e lie , ma bilie ọzọ. Onyenwe anyị Jizọs, biko bata nime obi m na-azọpụta mkpụrụ obi m na-agbanwe ndụ m taa. Amen.
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ tụkwasịrị obi Jizọs Kraịst dị ka gị nzọputa, ma na ị na-ekpe ekpere na ekpere na pụtara na ya si gị n'obi, m na-ezisa unu na-adabere n'Okwu Chineke, ị na-ugbu a zọpụta site Hell na ị bụ na ụzọ gị Heaven. Welcome ndị ezinụlọ nke Chineke na ekele na-eme ihe kasị mkpa ná ndụ na na na-na-anata Jizọs Kraịst dị ka Onyenwe gị na-nzọputa. Maka ozi ọzọ na-enyere gị na-eto eto na ọhụrụ gị hụrụ okwukwe na Kraịst, na-aga Gospel Ìhè Society.com na . agụ "ihe na-eme Mgbe Ị Tinye site n'Ọnụ Ụzọ" Jesus Christ kwuru na Jọn 10: 9, "Abụ m ọnụ ụzọ: site m ma ọ bụrụ na onye ọ bụla-abata, ọ ga-azọpụta, ọ ga-aga na ya, ma na-achọta ịta nri. "
Chineke hụrụ gị! Anyị hụrụ gị n'anya! Ka Chineke na-agọzi gị, na nwere oké New Year!